Sadio Mane oo guuleystay laacibka bishii Agoosto ee kooxda Liverpool – Gool FM
Sadio Mane oo guuleystay laacibka bishii Agoosto ee kooxda Liverpool
Haaruun September 7, 2016
(Liverpool) 07 Sebt 2016 – Sadio Mane ayaa lagu abaal-mariyey maanta bilowgiisa heerka sare ah ee xirfaddiisa kooxda Liverpool, waxaana loo magacaabay xiddiga bishii Agoosto ee kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan 2016-17.
Weeraryahanka xulka qaranka Senegal ayay xagaagan kala soo saxiixdeen kooxda Southampton, waxaana bishii Agoosto kulamadii uu u ciyaaray Reds soo bandhigay wax cajiib ah.
Mane oo ciyaaray dhammaan saddexdii kulan ee Premier League ay dheeshay kooxdiisa Liverpool bishaas Agoosto ayaa waxa uu ka dhaliyey Arsenal kulankii 4-3 ay uga adkaadeen kulankoodii furitaanka horyaalka Ingiriiska gool tartan u gali kara goolka xilli ciyaareedkan lagu guda jiro.
Sadio Mane ayaa helay 77% codadkii la dhiibtay, halka Philippe Coutinho oo galay kaalinta labaad uu uruursaday codad gaaraya 11%, codadka taageerayaasha kooxda Liverpool.
Halkaan hoose ka daawo waxa uu bishii Agoosto u qabtay Mane kooxda Liverpool:-
What a start to life at #LFC it’s been for Sadio Mane! pic.twitter.com/Di3eszA47E
— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2016
Nottingham Forest oo dhammaystirtay saxiixa xiddigii hore ee kooxda Arsenal Nicklas Bendtner
DERBY D'ITALIA: Iibsiga tigidhada kulanka Inter-Juve ee todobaadka 4-aad oo xawaare ku soconaya!